ယူနိုကျတကျကို ၆-၁ နဲ့ နိုငျတဲ့ပှဲကို အကောငျးဆုံးပှဲအဖွဈ မနျစီးတီးပရိသတျတှေ ရှေးခယျြ - Sports Home Time
UNICODE – ၂၀၁၂ ခုနှဈ မလေ ၁၄ ရကျမှာတော့ အဂှယျရိုရဲ့ သှငျးဂိုးနဲ့အတူ မနျစီးတီးရဲ့ ရှရေ့ောငျကာလတှေ စတငျခဲ့ပါတယျ။ 93:20 လို့ မနျစီးတီးပရိသတျတှကွေား သိကွတဲ့ အဆိုပါပှဲဟာ စီးတီးသမိုငျးမှာ အကောငျးဆုံး ပှဲလညျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
မနျစီးတီးကို ပရီးမီးယားလိဂျဖလား အနိုငျရစခေဲ့တဲ့ အဆိုပါပှဲပွီးရငျ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈနောကျပိုငျး အကောငျးဆုံးပှဲတှကေ ဘယျလိုပှဲတှပေါလဲ။ မနျစီးတီးသတငျးထောကျဖွဈတဲ့ Sam Lee က The Athletic သတငျးမှာ ဖျောပွခဲ့ပွီး ပရိသတျတှကေိုယျတိုငျ ဆန်ဒပွုမှုအရ ကြူပီအာကို အနိုငျရတဲ့ပှဲအပွငျ စီတီးရဲ့ အကောငျးဆုံးပှဲအဖွဈ ယူနိုကျတကျကို ၆ ဂိုးပွတျ အနိုငျရတဲ့ပှဲကို ရှေးခယျြခဲ့ကွပါတယျ။
1-6, October 2011
Sam Lee က ” ယူနိုကျတကျကို မနျစီးတီးရဲ့ ၆-၁ ဆိုတဲ့ ရလဒျဖွငျ့ အနိုငျယူမှုက မနျခကျြစတာဒါဘီတငျ မဟုတျဘဲ အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကကိုပါ ပွောငျးလဲစခေဲ့ပါတယျ။ ဒီနိုငျပှဲကပဲ နောကျထပျ ၇ လအကွာမှာ အဂှယျရိုရဲ့ “93:20” အနိုငျဂိုး ဖွဈလာစဖေို့ အထောကျအပံ့ဖွဈခဲ့တာပါ။ ဂိုးကှာခွားခကျြနဲ့အတူ မနျစီးတီးရဲ့ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျဖလား ဖွဈလာခဲ့တယျ။
ယူနိုကျတကျကို ၆-၁ နဲ့ နိုငျတဲ့ပှဲကို အခုခြိနျထိ ပှဲတှတေိုငျး ပွောနကွေတုနျးပါပဲ။ ထောငျပေါငျးမြားစှာသော ယူနိုကျတကျပရိသတျတှကေ အိုထရတျဖိုဒျ့ကနေ ထှကျခှာသှားခဲ့ပွီး မနျစီးတီးပရိသတျတှကေ ၁၀ ဂိုးဖွဈသငျ့တယျလို့ ကွှေးကွျောခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ၆ ဂိုးကလညျး လုံလောကျခဲ့ပါတယျ။ နောကျပွီး ဘာလော့တယျလီရဲ့ ကြျောကွားတဲ့ “Why Always Me? ဆိုတာကောပေါ့ ” လို့ ဖျောပွခဲ့ကွတယျ။
Leicester 0-1 City, May 2019
ယူနိုကျတကျကို ၆ ဂိုးပွတျ နိုငျတဲ့ပှဲဟာ ဆုဖလားအနိုငျရစခေဲ့တဲ့ ကြူပီအာပှဲ မပါဘဲ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈနောကျပိုငျး မနျစီးတီးရဲ့ အကောငျးဆုံးပှဲအဖွဈ မနျစီးတီးပရိသတျ ၅၇.၅% ထိ မဲပေးခဲ့ကွတာဖွဈတယျ။ နောကျထပျ မဲပေးကွတဲ့ပှဲကတော့ မဲပေးမှု ၂၀.ဂ% နဲ့အတူ မနှဈက ဘောလုံးရာသီ လကျစတာကို ၁-၀ နဲ့ အနိုငျရတဲ့ပှဲဖွဈတယျ။
မနှဈကဘောလုံးရာသီဖွဈတဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ မလေမှာတော့ မနျစီးတီးဟာ လကျစတာနဲ့ အဝေးကှငျးမှ သှားရောကျ ယှဉျပွိုငျပွီး ကှနျပနီရဲ့ သှငျးဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။ အဆိုပါ နိုငျပှဲကပဲ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈရေး အနီးကပျပွိုငျဘကျ လီဗာပူးအသငျးကို နှာတဈဖြားအသာနဲ့ ကြျောဖွတျဖို့ အရေးပါစခေဲ့ပါတယျ။
ZAWGYI – ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၁၄ ရက်မှာတော့ အဂွယ်ရိုရဲ့ သွင်းဂိုးနဲ့အတူ မန်စီးတီးရဲ့ ရွှေ့ရောင်ကာလတွေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ 93:20 လို့ မန်စီးတီးပရိသတ်တွေကြား သိကြတဲ့ အဆိုပါပွဲဟာ စီးတီးသမိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး ပွဲလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီးကို ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား အနိုင်ရစေခဲ့တဲ့ အဆိုပါပွဲပြီးရင် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း အကောင်းဆုံးပွဲတွေက ဘယ်လိုပွဲတွေပါလဲ။ မန်စီးတီးသတင်းထောက်ဖြစ်တဲ့ Sam Lee က The Athletic သတင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြုမှုအရ ကျူပီအာကို အနိုင်ရတဲ့ပွဲအပြင် စီတီးရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲအဖြစ် ယူနိုက်တက်ကို ၆ ဂိုးပြတ် အနိုင်ရတဲ့ပွဲကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Sam Lee က ” ယူနိုက်တက်ကို မန်စီးတီးရဲ့ ၆-၁ ဆိုတဲ့ ရလဒ်ဖြင့် အနိုင်ယူမှုက မန်ချက်စတာဒါဘီတင် မဟုတ်ဘဲ အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကကိုပါ ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနိုင်ပွဲကပဲ နောက်ထပ် ၇ လအကြာမှာ အဂွယ်ရိုရဲ့ “93:20” အနိုင်ဂိုး ဖြစ်လာစေဖို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဂိုးကွာခြားချက်နဲ့အတူ မန်စီးတီးရဲ့ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ယူနိုက်တက်ကို ၆-၁ နဲ့ နိုင်တဲ့ပွဲကို အခုချိန်ထိ ပွဲတွေတိုင်း ပြောနေကြတုန်းပါပဲ။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေက အိုထရတ်ဖိုဒ့်ကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး မန်စီးတီးပရိသတ်တွေက ၁၀ ဂိုးဖြစ်သင့်တယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ၆ ဂိုးကလည်း လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘာလော့တယ်လီရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ “Why Always Me? ဆိုတာကောပေါ့ ” လို့ ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။
ယူနိုက်တက်ကို ၆ ဂိုးပြတ် နိုင်တဲ့ပွဲဟာ ဆုဖလားအနိုင်ရစေခဲ့တဲ့ ကျူပီအာပွဲ မပါဘဲ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း မန်စီးတီးရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲအဖြစ် မန်စီးတီးပရိသတ် ၅၇.၅% ထိ မဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ် မဲပေးကြတဲ့ပွဲကတော့ မဲပေးမှု ၂၀.ဂ% နဲ့အတူ မနှစ်က ဘောလုံးရာသီ လက်စတာကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင်ရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။
မနှစ်ကဘောလုံးရာသီဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလမှာတော့ မန်စီးတီးဟာ လက်စတာနဲ့ အဝေးကွင်းမှ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ကွန်ပနီရဲ့ သွင်းဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ အဆိုပါ နိုင်ပွဲကပဲ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ရေး အနီးကပ်ပြိုင်ဘက် လီဗာပူးအသင်းကို နှာတစ်ဖျားအသာနဲ့ ကျော်ဖြတ်ဖို့ အရေးပါစေခဲ့ပါတယ်။
အနာဂတျအတှကျ ကိုငျးဟာဗကျ ရှေးခယျြသှားသငျ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ မနျနဂြော သုံးဦး